Fractional Co2 Laser, Diode Laser Nwepu Ntutu - Haidari
Anọ n'otu laser laser CO2 bụ ezigbo nhọrọ n'ọhịa nke Cosmetology, ọgwụgwọ na ịwa ahụ. Iji mma ọgụgụ isi scanning isi, ọgwụgwọ ebe nwere ike họrọ a dịgasị iche iche nke ndịna maka ọgwụgwọ anụ ahụ, repaint akpụkpọ, akara afọ ime akara mwepụ, melanin mwepụ; ọgwụ igwe anaghị agba nchara gynecological ọgwụgwọ isi, tightening ikpu, ọcha ọcha labia mmetụta dị ịrịba ama; 7 ogwe aka na-eduzi ọkụ, ntụgharị 360 Celsius, jikọtara ya na isi 100 mm maka ịwa ahụ laser; Igwe laser esi na USA weta ume siri ike na ndụ ogologo ndụ.
High Quality Portable Co2 Fractional Laser Vagi ...
Fractional Co2 Laser mmamiri Tightening Laser M ...
1060nm 4 ejiri Diode Laser Isi Ọdịdị arọ ...
Picosecond Laser Tattoo mwepụ Machine